Xiriirka Caafimaad ee Ka Dhaxeeya Fadhiga Dheer, Daawashada Telefishanka iyo Shaqada Xafiisyada • Horseed Media
You are here: Home / Articles / Xiriirka Caafimaad ee Ka Dhaxeeya Fadhiga Dheer, Daawashada Telefishanka iyo Shaqada Xafiisyada
Xiriirka Caafimaad ee Ka Dhaxeeya Fadhiga Dheer, Daawashada Telefishanka iyo Shaqada Xafiisyada
Fadhiga mudada dheer ee qofku hor fariisto Telefishinka ama Computer hortiis wax ka badan 4 saac maalin kasta isagoo wax xarakaad ah samayn waxa uu qofkaasi aad khatar ugu yahay in ay haleelaan xanuunada wadnaha ama soo boodada waxa loo yaqaan xanuunka shalalka ( dhiiga maskaxda ku shuba) ee haleela maskaxda iyo xidida la shaqeeya.
Sida lagu sheegay natiijo ka soo baxday Jaamacadda Central Florida ee Maraykanka oo lagu shaaciyay maalintii Arbacada ahayd Journal of the American Heart Association, ayaa waxa uu tibaaxay saamaynta caafimaad ee ay u leeyihiin wadnaha fadhiga saacadaha dheer oo xiriiriska ah ee daawashada Telefishinada iyo Xafiisyada shaqada ee lagu shaqeeyo Computerka.
Cilmi baaristan ayaa waxaa lagula socday xaaladda dad gaaraya 592 qof muddo 8 sano ah, kuwaas oo shaqadoodu u badnayd fadhiga xafiisyada waqtiga aadka u dheer iyo daawashada Telefishinka, waxa ay natiijada daraasaddan soo saartay kuwa fadhiya 4 saac oo xiriiris ah oo aan samayn wax xarakaat ah in ay haleeleen xanuunada wadnaha gala iyo soo boodada xanuunka shalalka ee curyaansha shaqada maskaxda iyo xidida la xiriira.
129 dadkaas ka mid ahaa sida lagu sheegay cilmi baaristaas waxaa haleelay wadna xanuun, halka 205 kamid ahna ay u dhinteen xanuuno la xiriira wadno garaan ( Heart attack).
Daraasaddu waxa ay intaas ku dartay dadkaas qaarkood waxa ay samayn jireen marka ay shaqada ka rawaxaan ama ka kacaan daawashada telefishinka jimicsi jidh ahaaneed oo iska caadi ah hal mar maalintii, heerka noloshooduna waxa uu ahaa mid dhex dhexaad ah, inkastoo qaybtood ay lahaayeen caadooyiin sigaar cabbid taas oo aad ugu daran wadnaha.
Dadka waqtiga dheer Telefishinka habeenkii ama maalintii daawanayay saacadaha dheer waxa barbar socotay iyagoo qaarkood ku dul cunayay cunnooyin cul culus, isla markaasna ku dul gam’aayay goobta ay ku daawanayeen Telefishinka, arinkaas oo iyana leh dhibaato caafimaad cunada ka bacdi oo toos jiif loo aado.
Haddaba waxaa jiray daraasado hore oo xaqiijiyay waqtiga dheer oo la dul fadhiyaa Computerka ama la daawadaa telefishinka waxa ay dadkaasi khatar ugu sugan yihiin 27% in ay si fudud ku haleelaan kansarka mindhicirka gala, kan naasaha, wadno xanuunka iyo jaldada ( faalidka) soo boodada ah .
Daraasaddu waxa ay ku talin dadka sameeya shaqooyinka xafiisyada ee waqtiga/ saacadaha dheer qaata in labadii saacba ay mar ka boodaan fadhiga oo ay sameeyaan iskala bixin ay ku jirto dhaq dhaqaaq jidh ahaaneed oo gaaraya illaa 10 daqiiqo si xubnihii jidhka ee saacadaha badan aan helin dhaq dhaqaaqii loogu tala galay ay u gutaan shaqadooda.
“Fiiro gaar ah : Dadka shanta salaadood iyo sunnayaashooda ku tukada si degan oo waliba socod u sameeya si ay salaadda jamaaco ugu tukudaan Masjidka, dhaqdhaqaaqii xubnaha jidhkoodu u baahnaa maalinkaas waxa ay ku helayaan si sahlan iyagoo gutay waliba waajibkoodii Islaamiga ahaa) لله في خلقه شان.
W/Q: Maxamed Cabdullaahi